Mmepeanya Dravidian na India - AFRIKHEPRI
Ihe omumu Dravidian na India
Ụzọ nke Nile, mmekọrịta dị n'etiti Ijipt oge ochie na nwa Afrika
LỌ ọdịnala nke ndị Dravidian na-ekwu na ndị a ga-erute India n'ihe dị ka -9.500 mgbe ha nwetachara ihe mberede nke ga-emetụta kọntinent ha dị na Ndịda India na East nke Madagascar, nke ahụ bụ ikwu na Oke Osimiri India. Ihe nchoputa ohuru emeputara mmepe nke Indus n’agha -7.500 na ichoputa ebe ohuru a puru iduba anyi n’ebo di anya. Nke a debara ndị Dravidians na ọnọdụ mgbe ochie ma na-atụ aro na ụbọchị ọbịbịa - 9.500 nwere ike ịbụ eziokwu. Ya mere ndi Dravidians gabigara ihe isi ike nke, ihe dika 9.500 ghaa kpuchie ala ha nile n’ime Oke Osimiri Indian. (Ka na-amụ akwụkwọ)
Ihe omuma di omimi A maara na ndi Dravidian, ndi ozo bu ndi ozo n'asa mmiri. Ihe ngosi a na-emepụta ihe àmà nke azụmahịa na Mesopotemia. Mbadamba nkume cuneiform Mesopotamia na-akọwa azụmahịa na ndị ahịa Dravidian bụ ndị na-ebupụ ọlaọcha ndị dị oké ọnụ ahịa, pearl, ọdụm, na-arụ ọrụ ọla kọpa, ihe mkpuchi na glassware. Ndị njem a laghachiri n'ọdụ ụgbọ mmiri nke Arabia site n'Oké Osimiri Uhie
A maara ndị Dravidians na ha bụ ndị na-adọrọ mmasị na ndị na-adịghị eme ihe ike karịa ndị ọzọ. Ma, otu ụbọchị, gburugburu afọ 1700, ọganihu ha enwewo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kpamkpam kpamkpam tupu ndị agha nke Aryan wakpoo ndị si North na-eme ka ha dị ka ehi ...
Ndị mmadụ laghachiri na ndịda India site n'aka Indo-Aryans. Ihe dị iche na-adị mfe n'etiti onye Indo-Aryan na Dravidian. Nke ikpeazụ a nwere agba gbara ọchịchịrị nke ukwuu, ọ fọrọ nke nta ka ọ dị ọcha. Ndị Dravidians abụghị ndị Hindu n'ụzọ nkịtị (ọ nweghị akwụkwọ Vedik ma ọ bụ usoro akwara ochie) - mana ha enweela mmetụta dị ukwuu n'okpukpe.
South Dravidian nwere mmadụ ise bụghị Negroid atụmatụ, ma pigmentation mgbe oké ọchịchịrị gbara, nke Brahmanical okpukpe, na ndi aha-ederịta akwụkwọ ozi ise asụsụ nke ha na-eji: na Telugu (fọrọ nke nta 55 nde), Canaras (n'elu 25 nde), Toulous (karịrị otu nde na ọkara), na Malayalam (30 nde) na n'ikpeazụ Tamils ​​(50 nde). (Agbụrụ Dravidian)
Ọtụtụ ebo ochie, na-asụ otu n'ime asụsụ ise Dravidian, nwere ụdị Negroid-Black, na ntutu isi, nke, ọgbọ ole na ole gara aga, na-eji ọkụ na-agba ọkụ. Ọ bụ ndị a taa na-enye ọtụtụ ndị ọrụ na-amaghị akwụkwọ na India.
Ndị Dravidian dị ike nke bi na ndịda na-ebi ma na-ekuo okpukpe ochie ha.
Ndị Aryan wakporo ha
Ka ọ na-erule afọ 1700, e meriri Dravian civilization nke India, mebie ya, ma dochie ya nke ebo ndị Iran na-awakpo na ndị si na North India na Oké Osimiri Caspian. nke a ga-emesị mata dị ka ARYENS.
N'ịbụ ndị na-asọgharị n'ọhịa ọhịa ndị a ARYENS bu ụzọ wakpoo ndagwurugwu Indus ma bibie obodo ukwu: HARAPA na MOHENJO - DARO (http://fr.wikipedia.org/wiki/Mohenjo-daro). Mgbe edozi na green na mbara ọzara, ha akp ha mmeri ná narị afọ abụọ na oge ochie ebo nile nke South West India, ese na-anwụghị nke meriri n'ógbè, na-efe chi nile ha na ịmụta ha n'ememe.
Obere ngwa ngwa na ikwenyere Hindu na alụmdi na nwunye dị iche iche na ndị ọhụrụ (alụmdi na nwunye n'etiti Aryans na Dravidians) ga-eme ka ndị ahụ meriri merie ahụ ga-eme ka ha kwụsị ikweta n'ememe ndị metụtara chi Shiva ...
Na India ọ ga-ewe a na narị afọ iri ịhụ aga (kwupụta -650) a mgbanwe nke echiche nke ndị ikom na ndị a ụzọ ọhụrụ nke na-aghọta chi ibu mara na nọn site oghere Brahmin ozizi (-nchu-àjà okpukpe na India) ndị ikom ndị a malitere ịjụ ime ihe ike gosiri site n'ihe nlereanya nke ha nsọ ndụ na chi ndị e gbuo ihe niile dị ndụ, kama ịnabata ndị na-adịghị ike na-agba ume a kpọrọ mmadụ na-ebi ndụ na mmụọ ọhụrụ nke conciliation na ịchụso okè ... na a spirit evolushọn amuru anọchie: okpukpe Hindu, okpukpe Buddha na Jainism na dochie Vedic okpukpe.
Ogologo oge ọkọchị: China, Vietnam, Japan, Korea, Cambodia, Siam, Malaysia, Bali, Java, Sumatra, Ceylon, Dravidian India, Nepal, Tibet, India, South Sea, West
27,00€ dị na ngwaahịa
2 ọhụrụ site na 27,00 €
Ejiri 2 € 24,99 mee ihe
dị ka Mee 25, 2020 11:02
Ụbọchị mwepụta 2007-11-22T00:00:01Z
Publication Ụbọchị 2007-11-22T00:00:01Z